Muxuu Jurgen Klopp Ku Yidhi Goolhayaha Arsenal Ee Bernd Leno Markii Uu Rikoodheyaasha Kaga Reebay Tartanka Carabao Cup? - Gool24.Net
Muxuu Jurgen Klopp Ku Yidhi Goolhayaha Arsenal Ee Bernd Leno Markii Uu Rikoodheyaasha Kaga Reebay Tartanka Carabao Cup?
Tababaraha Liveprool ee Jurgen Klopp ayaa shaaciyey kalmadihii uu ku yidhi goolhayaha Arsenal ee Bernd Leno markii ay dhamaatay ciyaartii Arsenal rikoodheyaasha ku badisay ee Reds kaga soo hadhay tartanka Carabao Cup.
Leno ayaa badbaadiyey rikoodheyaashii ay kusoo laadeen Divock Origi iyo Harry Wilson, waxaanu kooxdiisa siiyey fursad ay ugu gudubto wareegga 8da ee tartankan iyagoo rikoodheyaal 5-4 ah ku badiyey.
Liverpool ayaa inta badan ciyaarta maamulaysay, waxayse ku fashilantay inay shabaqa soo taabato iyadoo uu goolhaye Leno kubbado halis ahaa ka badbaadiyey Diogo Jota, Virgil van Dijk iyo Marko Grujic oo dhamaantood ku dhowaaday inay guusha siiyaan kooxdooda.
Jurgen Klopp oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shaaciyey kalmadihii uu goolhaye Bernd Leno ku yidhi markii ay ciyaartu dhamaatay, waxaanu yidhi: “Ciyaarta kaddib waxa aan u sheegay in aanan ku faraxsanayn waxa uu sameeyey.
“Dhab ahaantii waqtiyo wanaagsan ayaa nasoo maray intii ay ciyaartu socotay, tababare ahaanna waxa aan jeclaan lahaa in aanu dhalino laakiin waxa kale oo aan doonayay in aanu abuurno.
“Haa, wiilashu si fiican ayay u ciyaari karayeen balse ma hubo inay si fiican u ciyaari doonaan laba maalmood kaddib tababarkii aanu u beddelnay kulankii kooxda Arsenal.”
Jurgen Klopp waxa uu tilmaamay in Arsenal aanay siinin meelihii bannaanaa sidii kulankii hore ee ay usbuucan horraantiisii kaga adkaadeen, waxaanu yidhi: “Waxay sameeyeen gorfayntooda, namanay siinin meelo bannaan sidii ciyaartii hore. Waa inaad wax ka barato ciyaarta, waxaanay ila tahay in wiilashu si fiican sameeyeen.
“Run ahaantii si wanaagsan ayaanu isku difaacnay, kubbad fiicanna waanu ciyaarnay. Diogo ayaa waqtiyo wanaagsan qaatay, jidh ahaan iyo farsamo ahaanna wuu fiicnaa. Waxa aanu muujinay tayo, kaliya waxa noo shaqayn weyday in aanu dhamaystirno. Mar kale ayaanu isku dayi doonaa, waanan idiin ballanqaadayaa.”